किन मानिसहरूले तपाईंको ब्रान्ड अनुसरण गर्न रोके? | Martech Zone
किन मानिसहरूले तपाईंको ब्रान्ड अनुसरण गर्न रोके?
शनिबार, मार्च 21, 2015 शुक्रबार, मार्च 20, 2015 Douglas Karr
हामीले डिजाइन गरेको र प्रकाशित गरेको हाम्रो मनपर्ने इन्फोग्राफिक्स मध्ये एक थियो मान्छेहरूले ट्विटरमा तपाइँलाई किन बेवास्ता गर्दछन्। मान्छेहरु यो बाट एक बाकस भयो र आशा छ कि यसले तिनीहरूलाई आफ्नो सामाजिक मिडिया प्रकाशन रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्दछ।
मँ यहाँ केहि ब्यक्त गर्न जाँदैछु जसले केही मानिसहरूलाई चकित पार्न सक्छ:
मलाई मतलब छैन यदि मानिसहरूले मेरो अनुसरण गर्न वा मेरो ईमेलबाट सदस्यता रद्द गरे भने।
म अहिले क्रोध र स्तब्धको आवाज सुन्न सक्छु ... र म तिनीहरूको बारेमा वास्ता पनि गर्दिन। म बिरामी छु र मार्केटर्सले थकित छु परिणामको सट्टा नेत्रगोलको पीछा गर्दै। प्रशंसकहरू, अनुयायीहरू र ग्राहकहरूको बहुमत तपाईंको व्यवसायको लागि बेकम्मा छन्। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले श्रोताहरूको ख्याल गर्नु हुँदैन, म इमानदार छु। नम्बरहरू केवल उपभोक्ताहरू र व्यवसायका लागि तपाईंलाई न्याय गर्नको लागि एक मान्यीकरण विधि हुन् ... अरू केहि पनि छैन।
र साधारणतया किनभने कोही सदस्यता रद्द गर्नुको मतलब यो होइन कि तपाईंको ब्रान्डले केहि गरेको थियो गलत। त्यहाँ हजारौं कारणहरू छन् किन कसैले तपाईंको सामाजिक च्यानल वा तपाईंको न्यूजलेटरबाट अनफलोक वा सदस्यता रद्द गर्दछ। हुनसक्छ उनीहरूले कम्पनी छोडिदिए होला, हुनसक्छ उनीहरूको पदोन्नति भयो होला, सायद उनीहरूको कामको जिम्मेवारीहरू सरेका होलान, हुनसक्छ उनीहरूले सोच्थे कि तपाईको ब्रान्ड बिल्कुलै फरक थियो।
पालनपोषण प्रत्येक अनुयायी वा ग्राहकले खरीदको लागि आशा गर्ने कार्य होइन। पालनपोषण पनि एक अवधि हो जहाँ सम्भावनाले तपाईंको ब्रान्डमा अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छ र निर्णय गर्नुहोस् जुन तपाईं फिट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। त्यसैले ... केहि बिदा।
के यसको मतलब त्यहाँ चीजहरू छैनन् जुन तपाईं तिनीहरूलाई भगाउन लाग्नु भएको छ? होईन। मैले भर्खर यस हप्ताका एक सहकर्मीलाई जवाफ दिएँ र मलाई भन्यो कि उनी मेरो ईमेलको टोन र स्प्यामनेसमा हल्का हिसाब गर्दै छन्। म उसलाई जान्न चाहन्छु कि ऊ एकदम कडा र पछाडि धकेल्दै छ, अन्यथा उसले मलाई गुमाउनेछ। फेरी, म उसको आदर्श ग्राहक होइन त्यसैले उसले मेरो कुरा सुन्नुहुन्न!
सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि २१% ले बोरिंग सामग्रीको नतिजाको रूपमा नपछ्याएको कारण फेसबुक वा अव्यवस्थित फिडका धेरै पोष्टहरू। कम बढी हुन सक्छ ... त्यसैले तपाईंको अधिकतम फ्रिक्वेन्सीलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईंको सेक्टरमा अन्यसँग तुलना गरेर वा परीक्षण चलाउनुहोस् जहाँ तपाईं फ्रिक्वेन्सी घटाउनुहुन्छ।
मैले यो हजारौं पटक भनें, किन मानिसहरूले तपाईंलाई सुन्नको लागि कारण तपाईं उनीहरूको मूल्य प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। मान प्रदान गर्न जारी राख्नुहोस् र तपाईं प्रासंगिक अनुयायीहरू र ग्राहकहरू राख्नुहुनेछ। अधिक समय, तपाईं विश्वास निर्माण र एक संलग्नता चाँडै पछ्याउनेछ। तर जब केही मान्छेहरूले छोड्छन आफैलाई लात हान्नुहोस् ... यो ठीक हुनेछ। राम्रो खोज्नुहोस्!
फ्रेक्टल र Buzzstream यी उत्तरहरू र अनुयायीहरू गुमाउनु पर्ने कारणहरू पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गर्नुहोस् 900 ०० सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू।
टैग: बढ्दो दर्शकहरुबढ्दो ग्राहक सूचीमान्छे अनफलोको कारणव्यक्ति सदस्यता रद्द कारणमूल्य
किन तपाइँ २०१ Your मा तपाइँको भिडियो मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ
प्रभावी डिजिटल कुपन मार्केटिंगका लागि T सल्लाहहरू